Liverpool oo diyaarad gaar ah u diraysa Sadio Mane si uu uga soo gaaro kulanka Liverpool vs Chelsea – Gool FM
Liverpool oo diyaarad gaar ah u diraysa Sadio Mane si uu uga soo gaaro kulanka Liverpool vs Chelsea
(Liverpool), 29 Jan 2017 –Sida lagu qoray ‘Liverpool Echo’ waxaa Milkiileyaasha kooxda Liverpool ‘Fenway Sports Group’ ay Diyaarad gaar ah u diyaariyeen Weeraryahankooda Reer Senegal Sadio Mane oo xulkiisu shalay ka haray Koobka Qarammada Afrika 2017 markii ciyaar faraha looga gubtay ay guuldarro 5-4 (gool ku laad) kala kulmeen Cameroon.
Diyaaraddan gaarka ah ayaa loogu talo galay in Mane ay ka soo qaaddo Senegal isla markaana keento Ingiriiska si uu uga soo gaaro ciyaarta adag ee ay Liverpool garoonkeeda Anfield kula ciyaari doonto kooxda Chelsea maalinta Talaadada ah, kulankan oo ka tirsan Horyaalka Ingiriiska.
Mane ayaa khasaariyay gool ku laadkii muhiimka ahaa kaas oo sababay in xulkiisu ka haro Koobka Afrika.
Mane ayay kooxdiisa Liverpool aad u tabtay tan iyo markii uu ka aaday ciyaaraha Afrika, waxaana tan iyo markii uu ka tegay naadigiisu guuleystay 1 jeer oo qura, iyadoo Liverpool laga reebay labada koob ee League Cup iyo FA Cup isla markaana hoos u dhacay heerkoodii Premier League.
Inkastoo Mane uu u baahan yahay in niyadda loo dhiso maadaama lugtiisa uu ku reebay xulkiisa ayaa haddana waxaa arrintani ay farxad u tahay taageerayaasha Liverpool oo ku qayliyay in xilligii uu soo laaban lahaa laga soo hor mariyo oo uu u soo gurmado naadigiisa.
UDINESE VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay galabta kusoo geli karaan!
“Real Madrid way ku guuleysan kartaa La Liga haddii…”Sergio Ramos